Ukuze lula lo msebenzi, cishe njalo esizinikezele isihloko nenkathi yokukhulelwa nokubeletha, kukhona umshini wokubala ekhethekile lapho ufaka imininingwane yakho bese libuyela sibalo (amasonto sokukhulelwa). Kuba ukuthi kusukela kule kulula? Ingabe lesi sibalo yombuzo, bangaki Emasontweni onke okukhulelwa ihlala? Kungakhathaliseki ukuthi ngeke ukwanelisa lesi umama osemncane? Mhlawumbe hhayi, ngoba ayiqondi lavelaphi nje onethonya. Ukuze wakhe, akuhlukile kulokho lithi obelethisayo kumephu.
Okokuqala udinga ukuthola sokukhulelwa zokugcina kangakanani kubantu. Zonke lwabalwa sasivumela ngokunembile: amahora 5600, izinsuku 280 noma 9 izinyanga ikhalenda.
Kunengqondo, ukubala yobudala sokukhulelwa ngokushesha futhi kalula, kanye ukunquma usuku kwezidingo. Ngakho kungani ukudideka okuningi kangaka? Abanye besifazane abangamaRom babesizakala zilungele phikisana ngokwabo hoshozela odokotela ku imigomo kufakazele nokuthi bazi kangcono ukuthi bangaki Emasontweni onke okukhulelwa ihlala kubo, bethi ukhumbule kahle ngosuku nje ebamba isisu.
kuphakama A ukudideka ezifanayo kusukela Empeleni lowo nalowo obambe iqhaza engxoxweni ukhetha isiqalo sakhe iphuzu. Owesifazane ibala kusukela ngosuku umuntu ekhulelwa, ngoba uyazi ncamashi. Kodwa naye lo wesifazane okungalungile. Umkhawulo bona owesifazana yokwazi ngokuthé ngqo - usuku lapho walala naye umlingani wakhe. Futhi, Angazi kahle usuku ke kulingana usuku nje ebamba isisu.
Ukuze uqonde ukuthi yini engahambanga kahle, kungase kudingeke uqonde inqubo izitho zomzimba. Isikhathi evumayo kakhulu ekuhlaleni kwesisu - ke yilo usuku nge-ovulation. Ngalolu suku, Iqanda avuthwa ukhululeka follicle. Nokho, Iqanda ukunyakaza ngokusebenzisa amashubhu fallopian ukuthatha izinsuku ezimbalwa, futhi phakathi naleso sikhathi-ke kufanelekile kokukhulelwa. Isidoda amaseli Kungenzeka futhi zikhona emzimbeni yabesifazane kwaphela izinsuku eziningana. Ngakho-ke, isidoda Ungafaka kwesibeletho ngosuku olulodwa (kwaba owesifazane wakhe uthola usuku owesifazane ebamba) futhi zalisa iqanda kwenye. It kuvela ukuthi usuku owesifazane ebamba ayikwazi ukucaciswa, ngaphandle kokuthi owesifazane kuyoba njalo ngaphansi isibhamu imishini enamandla.
Yingakho gynecologists ngophawu yobudala sokukhulelwa ehlukile. Bathembele kusukela osukwini lapho owesifazane uqale ngenyanga edlule. Ngokuvamile lolu suku owesifazane owaziyo ngempela, okusho ukuthi kukhona ukunamathela eqinile nakho ngeke kusize ukuba ngosuku oluthile. Lolu hlelo ukubala ibizwa ngokuthi inkathi azoya. Hhayi kunzima ukuqagela ukuthi nge umjikelezo esezingeni amaviki 4, umehluko phakathi isikhathi langempela okukhulelwa kanye azoya cishe 14-izinsuku. Bangaki Emasontweni onke okukhulelwa ihlala ngokuvumelana nemigomo azoya? Impendulo ilula - amasonto 40. ngenyanga zokubelethisa ilingana ezingu-28, ubude komjikelezo owesifazane ovamile sika. Kuyinto lowo esithathwayo njengendlela yekucala.
Kusalokhu umbuzo wokugcina: indlela cabangela isikhathi yokukhulelwa ultrasound ongoti, futhi kungani injalo ngokuvamile ezahlukene kusukela kulokho okubizwa ngokuthi gynecologists? Kusekhona kulula. Abanaso cabanga ke nhlobo. ukuthuthukiswa kwengane Sekuyisikhathi eside zaveza amasonto, futhi lesi sibalo embikweni ukhomba US esiteji wokukhula kwengane esiswini. Okungukuthi, irekhodi ne umbandela othile kusho ukuthi ukuthuthukiswa umntanakho ncamashi oluhambisana umnqamulajuqu. Umsebenzi we udokotela ukuqhathanisa ukuphila kwakho kulinganiselwa nokuthuthukiswa kanye nokuthola ukuthi kungokwemvelo esimweni sakho, ngaphambi, noma besebenzisa.
uhlelo Enobunye ekubaleni imigomo ebhekisela usuku oluthé ngqo kuyadingeka ukuze Wabesifazane olungaqhathaniswa engu sokukhulelwa kanye ezingeni yentuthuko umbungu ukuze baqonde ukukhulelwa kwenzeka kahle kanjani, azikho kahle kwezinso noma ukubambezeleka zentuthuko. Ngakho akukho iphuzu e ukuphikisana udokotela wakho mayelana zingaki izinyanga yokukhulelwa ihlala nawe, ngoba, okokuqala, yobudala sokukhulelwa - umqondo isihlobo, futhi okwesibili, awusebenzi ukusungula babelwazi usuku oluqondile lokuzalwa. kusiza Usezonikeza, enkathini kulindeleke ukubukeka ingane kuphela. Futhi eziningi umehluko bangaki amasonto ukukhulelwa ihlala akukho.
"Ebusuku Museum 2": ifilimu abadlali